I-Retreat yaseNtabeni eSidwa
Ukuhlala okukodwa kwisiseko seyona ndawo iphakamileyo yeColorado. Ibekwe phakathi kwe-14,000 yeencopho zeenyawo ezinokufikelela ngokulula kwidolophu yaseLeadville, iTwin Lakes, iNtaba yeCopper, iBreckinridge nokunye, nokunye okuninzi. Ikhaya lethu elisezintabeni liya kukunika indawo yokuhlala oyinqwenelayo ngaphandle kokuncama ukusondela kwizinto ezinomtsalane zasekhaya. Esi sithuba sekhabhinethi sinezinto zonke ozifunayo kwi-adventure yakho elandelayo.
Iindwendwe ziyakonwabela iindawo zazo zabucala kwindawo yethu yokuhlala eyi-1500 square foot ezantsi kwindawo yokuhlala. Le ndawo iye yahlaziywa njengendawo "yokuhlala abasebukhweni" ukubandakanya yonke into oya kuyidinga kuhambo lwakho olulandelayo. Iindwendwe zineyazo yokungena esithubeni. Mna nomyeni wam sihlala kwindawo kwaye sikwinqanaba eliphambili lekhaya. Iindwendwe ziya kuba nazo zonke iiflethi ezikumgangatho osezantsi. Le ndawo inomnyango wayo wabucala oneqhaga.
ILake County, iColorado iLayisensi yokuRenta ixesha elifutshane # 2021-85A
ILeadville, eyona dolophu iphakamileyo eUnited States ilikhaya kwezona ndawo ziphakamileyo zaseColorado, iMt. Elbert kunye neMt. Massive, iyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokutsiba kuzo zonke iintshukumo zakho zangaphandle. Kufuphi nokunyuka intaba, ukukhwela ibhayisekile kunye neendlela zokutyibiliza, ukukhwela umlambo, ukukhwela inqanawa, i-kayaking, kunye nophononongo lwangaphandle olungenasiphelo - kukubonelela ngokusondeleyo kulonwabo lwexesha elikhulu ngaphandle kokuphulukana novakalelo lwedolophu encinci.
Abanini banokukunceda ukuba ukukhokele kuyo yonke into enokuthi inikezelwe ngummandla, kubandakanya nezona ndawo zibalaseleyo zasekhaya kunye neendlela ezihanjwa kancinci ngalo naliphi na ixesha lonyaka.
Sinika iindwendwe zethu indawo yazo eyimfihlo kangangoko zikhetha ukuquka ukungena ngaphandle koqhagamshelwano. Singumbhalo kuphela, okanye umnxeba ukuba unemibuzo. Ukwaneliseka kwakho yeyona nto iphambili kuthi #1, ke nceda ungathandabuzi ukufikelela ukuba kukho nantoni na esinokuyenza ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke ngakumbi.
Sinika iindwendwe zethu indawo yazo eyimfihlo kangangoko zikhetha ukuquka ukungena ngaphandle koqhagamshelwano. Singumbhalo kuphela, okanye umnxeba ukuba unemibuzo. Ukwaneliseka kw…